आकर्षण को नियम प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | 15 सक्छ, 2018 | आकर्षण को कानून |2|
के तपाईं धेरै व्यक्ति मध्ये एक हुनुहुन्छ जुन उही ठाउँको लागि उडाियो जब तपाईंले पहिलो पटक आकर्षणको कानून फेला पार्नुभयो? के ब्रह्माण्डमा सबै चीज उही तरंगदैर्ध्यमा उर्जाको लागि आकर्षित छन् भन्ने सोचाइले तपाईंलाई अर्थपूर्ण बनायो? के तपाइँ आकर्षण को नियम प्रयोग गर्न सिक्न चाहानुहुन्छ?
आकर्षण को कानून को सन्देश पत्ता लगाउँदा धेरै व्यक्ति affirmations गर्न शुरू, एक व्यक्तिगत विकास योजना वा एक व्यक्तिगत कार्ययोजना सिर्जना जहाँ तिनीहरूले आफ्नो लक्ष्य निर्धारित गर्न।
आकर्षण को कानून तपाईंलाई सिकाउँछ कि सकारात्मक विचारहरूले सकारात्मक परिणामहरू ल्याउँदछ, त्यसैले धेरै व्यक्तिहरू सकारात्मक चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् र सकारात्मक चीजहरू तिनीहरूमा आउने प्रतीक्षा गर्छन्।
अब जब कि उनीहरू यस शक्तिशाली उपकरणको बारे सचेत छन् उनीहरूले आशा गर्छन् कि त्यसले यो काम गरेको चाहन्छ। तर आकर्षणको कानूनले काम गर्दैन। यसैले तपाईंले आकर्षणको नियम प्रयोग गर्न सिक्नुपर्दछ।
जुन हार्डी द्वारा
आकर्षण को कानून बिभिन्न विश्वव्यापी कानूनहरु मध्ये एक हो, तर यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण हो।
सरल शब्दमा भन्ने हो भने, आकर्षणको कानून एक नयाँ विचार अवधारणा हो जसले भन्छ कि 'जस्तो मनपर्दछ' जस्तो छ, र त्यो सकारात्मक सोचले सकारात्मक परिणाम ल्याउँदछ र नकारात्मक सोचले नकारात्मक परिणामको परिणाम दिन्छ।
त्यो केहि अलि धेरै सरल देखिन्छ। यदि मैले गर्नुपर्ने सबै नयाँ BMW भएको बारेमा सकारात्मक सोच्नु थियो भने, यो मेरो ड्राइवेवेमा तत्काल पार्क गर्नुपर्दछ। यो गर्नु हुँदैन ?.
बब प्रोक्टर, आफ्नो पुस्तक बोर्न रिच मा एक acorn प्रयोग गर्दछ कसरी आकर्षण को कानून काम गर्दछ को उदाहरण को लागी। उनले हामीलाई यो एकोर्न देखेर कल्पना गर्न लगाए र याद गरे कि यो, अन्य सबै भौतिक पदार्थहरू जस्तै, वास्तवमा कम्पनको धेरै उच्च गतिमा चालु ऊर्जाको स collection्ग्रह हो।
एकोर्न भित्र पट्टिबद्ध योजना वा न्यूक्लियस हुन्छ जुन कम्पनलाई आदेश दिन्छ र यसलाई बढ्ने कुरामा नियन्त्रण गर्छ।
ऐकोन वा बीउ रोप्ने बित्तिकै आकर्षणको कानूनमार्फत केन्द्रबिन्दु अनुसार नाभिकयसले सबै चीजहरू आकर्षित गर्न थाल्छ जुन यससँग मेल खान्छ।
यसले भुइँबाट आवश्यक सबै चीजलाई आकर्षित गर्दछ र तिनीहरू सामेल हुन्छन् र बढ्छन्। जब तिनीहरू विस्तार हुँदै जान्छन्, तिनीहरू तलको जरामा बढ्न थाल्छन्। जसरी टुप्पो माथि माथि बढ्दै जान्छ तिनीहरू पृथ्वीबाट भाँच्दछन् र जमिन माथि माथि बढ्न थाल्छन्। अन्तिम एक दिन सम्म त्यहाँ एक रूख खडा छ ..
मानव जस्तो नभई, acorn ले यसको न्यूक्लियस प्रोग्रामिंग परिवर्तन गर्न सक्दैन त्यसैले यो केवल यो बढ्न सक्दछ जुन यो प्रोग्रामिंगले निर्धारण गर्दछ - अर्थात् रूखमा।
तर हामी मानवले हाम्रो परिवर्तन गर्न सक्दछौं र हामी आफैंको व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग छान्न सक्छौं। आकर्षण को कानून को कारण, हामीले हाम्रो उर्वर दिमागमा रोपेको लक्ष्य न्यूक्लियस हो जसले अन्ततः हामी कुन कुरालाई आकर्षित गर्दैछौं र केहि बनाउँछौं भनेर के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ।
सबै कुरा डिजाइन द्वारा हुन्छ। चित्रहरू जुन हामीले हाम्रो अद्भुत दिमागमा रोप्दछौं त्यसले एक आकर्षण सेट अप गर्दछ जसले हामीलाई जीवनमा हाम्रा परिणामहरू दिन्छ। यो हाम्रो जीवनमा कसरी आकर्षित गर्न चाहन्छ भन्ने कुराको बारे हाम्रो दिमाग बनाउने हाम्रो अधिकार हो।
यो धेरै स्पष्ट देखिन्छ कि हामी कहिल्यै आफ्नो जीवनमा समृद्धि प्रकट गर्न सक्षम छैनौं यदि हामी नकारात्मक विचार सोच्न जारी छौं र अभावको अपेक्षाहरू छौं भने। हामी जहिले पनि केहि चीज आकर्षित गरिरहेको हुनाले, हामी वास्तवमै चाहिने कुरा आकर्षित गर्नको लागि बुद्धिमानी हुन्छौं त्यस्तै किसिमले अझ आकर्षित गर्नेको सट्टा।
बब प्रोक्टरले भनेझैं, "बुझ्नुहोस्, तपाईंले यो अर्डर गर्नुभयो, र यो तपाईंलाई समयमै अनुसूचीमा प्रदान गरिनेछ।"
त्यसोभए तपाईंको दिमागमा अद्भुत लक्ष्यहरू राख्नुहोस्। तिनीहरूलाई पोषण गर्नुहोस् र ती बीउलाई प्रवृत्ति गर्नुहोस् र आकर्षणको व्यवस्थाको कारण, तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो भविष्यमा बढ्न देख्नुहुनेछ।
जुन हार्डी एक सफल वेबमास्टर र लेखक हो। उनीले अभिव्यक्ति, विश्वास, चमत्कार, आकर्षणको कानून र अधिकको बारेमा ब्लगहरू र लेखहरू सिर्जना गर्दछ। वेबसाइटहरू आकर्षणको कानून हो र तपाईंको भविष्य सिर्जना गर्दछ।
तपाइँको जीवनमा के चाहानुहुन्छ भनेर आकर्षणको कानून कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस्
के यो लेखले तपाइँलाई जीवन कोचको सेवाहरू प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दछ? को NLP लाइफ कोच निर्देशिका तपाईको क्षेत्रमा व्यक्तिगत कोच, सम्बन्ध कोच र NLP व्यवसायीहरू सूचीबद्ध गर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय। धेरै प्रस्ताव टेलिफोन, स्काइप र अनलाइन सेवा तपाईं जहाँ तपाईं अवस्थित छन् पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
आकर्षणको व्यवस्था अरूलाई मद्दत गर्ने बारे हो। यदि तपाईंसँग कुनै सल्लाह, सुझावहरू तपाईं अरूहरूसँग साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रश्नहरू जुन तपाईं जवाफ दिन चाहानुहुन्छ, उपयोगी लेख वा टिप्पणीहरू जुन अरूलाई सहयोगी हुनेछ - केवल हाम्रो प्रश्न र उत्तरहरू फारम प्रयोग गरी एक पोष्ट वा उत्तर दिनका लागि।
Cliff जुन 30, 2019 मा 10: 02 अपराह्न
के तपाईंसँग आकर्षणको कानूनको साथ शुरू गर्ने कसैको लागि कुनै व्यावहारिक कदमहरू छन्?
व्यवस्थापक जुलाई 1, 2019 मा 10: 36 एम
तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यबाद।
आकर्षण को कानून मा यति धेरै जानकारी छ कि तपाईं शिक्षा को सबै भन्दा राम्रो तरीका छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको लागि सही छ।
गुप्त आधुनिक समयको सबैभन्दा प्रभावशाली आत्म-वृद्धि भिडियोहरू मध्ये एक हो। यो आकर्षण को कानून को लागी लाखौं मानिस परिचय र तपाईं पहिलो 20 मिनेट हेर्न सक्नुहुन्छ.
यदि तपाइँ पढ्न रुचाउनुहुन्छ, राम्रो ठाउँ सुरू गर्नको लागि हाम्रो नि: शुल्क डाउनलोड योग्य छ आकर्षण ईबुक को कानून.
जो सुन्न र जान्न मन पराउँछन् उनीहरूको लागि तपाईं पूर्ण संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ नेपोलियन हिलको सफलताको कानून.
अन्तमा केल्ली कूपरले एक उत्कृष्ट ब्लग लाईभलाइमाडेटोअर्डर.कॉम लेख्दछ जुन तपाईंले हेर्नु पर्छ।
पछिल्लोनमूना बढ़ई सीवी
अर्कोआकर्षण को कानून किन हुन सक्छ तपाइँले नचाहानु भएको कुरा ल्याउँदछ
सुखी जीवन जिउनका लागि तीन सल्लाहहरू
निम्बू र नकारात्मक उर्जा - किन मौरिसियो पोचेटिनो आकर्षण को नियम प्रयोग गर्दछ
यी 10 चरणहरूका साथ तपाईले चाहानु भएको जीवनलाई आकर्षित गर्नुहोस्
तपाईंको जीवनमा सकारात्मकहरू चिन्नुहोस् र उनीहरूको लागि आभारी हुनुहोस्
अप्रिल 3, 2021